Akụkọ Akpado "Njem na Ebe" - ULLER
Chọpụta ụzọ kachasị mma maka MTB na Madrid na Barcelona
Ọ bụrụ na ịchọrọ MTB ma ọ bụ na-eche ị na-agba gị ume ịmalite, anyị hapụrụ gị na post a ọtụtụ ụzọ MTB maka ọkwa niile na Madrid na Barcelona, ​​yana ntuziaka banyere ihe ị ga-adị njikere ma nwee nchekwa na gị Na-agụ!
10 ndagwurugwu kachasị mma na ịtụnanya n’ụwa
Ndagwurugwu bụ isi iyi nke mmụọ nsọ! Mbido ya na nhazi ya dị ịtụnanya n'ihi na anyị na-ahụ ihe okike na ịma mma ya niile. Maka na ị maghị, ndagwurugwu bụ mpaghara mara mma nke na-eme ka ụwa anyị bụrụ ebe ịtụnanya ịtụnanya ma malite ọhụụ ọhụrụ. Guo ma chọpụta ndagwurugwu kachasị mma na ụwa anyị!
Adventure, egwuregwu na egwuregwu na-eme njem na ndagwurugwu Aran
Ndagwurugwu Aran a ma ama dị ka ama ama Freerider Aymar Navarro si? Kpọmkwem! Ọ bụ ọnụahịa ndagwurugwu dị na Pyrenees, kpọmkwem na ógbè Lleida, na Catalonia. Nke a bụ isi obodo Ndagwurugwu Aran na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% nke ndị bi na mpaghara a bi ebe a. Ọ bụ ebe dị jụụ ma maa mma, juputara na ihe ị ga-eleta. Lee, anyị ga - achọpụta ya ma gwa gị ihe ị ga - eme ebe ahụ!
Gbanye na ndagwurugwu nke Colorado na snweta ikuku ohuru mgbe ị na-eme ski Ihe ịtụnanya ya dị ịtụnanya enweghị atụ. Chọrọ ịmatakwu banyere ahụmịhe skiing Colorado? Guo ma choputa ogo nke adrenaline nke ebe di egwu a nwere inye!